गगन थापा आजका मिति देखि ठूलो तनावमा ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/गगन थापा आजका मिति देखि ठूलो तनावमा !
गगन थापा आजका मिति देखि ठूलो तनावमा !
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको घोषणापछि सोही पार्टीका नेता गगन थापा झस्किएका छन् । शर्माले सुन्दरीजलमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच १४ औं महाधिवेशनमा आफू महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरेपछि नेता थापालाई तनाव हुने देखिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सुन्दरीजलमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच १४ औं महाधिवेशनमा आफू महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महामन्त्री पदमा चुनाव लड्ने औपचारिक घोषणा गरेका छन्।
बिपी कोइरालाको जन्मजयन्तीको अवसरमा सुन्दरीजल पुगेर शर्माले १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। आज बिपीको १०८ औं जन्मजयन्ती हो। सुन्दरीजलमा बिपी संग्रहालय छ, यहाँ बिपी(गणेशमान सिंहको शालिक पनि छ। शर्माले बिपी र गणेशमानको सालिकमा माल्यार्पण पनि गरे। सुन्दरीजल संग्रहालयलाई कांग्रेसको जीवित इतिहास पनि भन्ने गरिन्छ।
त्यसपछि शर्माले उपस्थित स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै आफू महामन्त्री उम्मेदवार हुने घोषणा गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा शर्माले आफू महामन्त्री बने नेपाली कांग्रेसलाई लगातार तीन आमनिर्वाचन जिताउन भूमिका खेल्ने संकल्प पनि गरे।
‘बिपीले देश समृद्ध बनाउने हो भने तीन पटक लगातार कांग्रेसले जित्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले एक पटक जित्ने अर्को पटक हार्ने भएको छ,’ शर्माले भने,‘कांग्रेसभित्र भएका सबै साथीहरूलाई एकजुट बनाएर लगातार तीन वटा आमनिर्वाचन जिताउने संकल्प लिएर मैले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु।’
सम्बोधनपछि सुन्दरीजलमा बिपीले रोपेको कपुरको बोटनजिकै शर्माले रूद्राक्षको बिरूवा रोपेका छन्। बिपीले २०३४ सालतिर सुन्दरीजलमा कपुरको विरूवा रोपेका थिए। त्यो बिरूवा हुर्केर ठूलो रूख बनिसकेको छ। सुन्दरीजलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले पनि कपुरका बिरूवा रोपेका थिए।
प्रवक्ता शर्मा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट छन्। शर्मा २०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य चुनिएका थिए। शर्मालाई सभापति देउवाले पार्टीको प्रवक्ता बनाएका हुन्। सभापतिमा फेरि यसपटक पनि देउवा उठ्ने तयारीमा छन्। देउवाकै टिमबाट शर्मा महामन्त्रीमा चुनाव लड्न लागेका छन्।
शर्मा नेविसंघको राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा आएका हुन्। उनी गत निर्वाचनमा झापा १ बाट माओवादीका राम कार्कीसँग पराजित भएका थिए। त्यसबेला प्रतिस्पर्धीलाई मित्रतापूर्ण व्यवहार गरेकोले उनको प्रशंसासमेत भएको थियो।
झापाका शर्मा नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्। उनले समाजशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनी कलिलै उमेर २०३७ देखि नै नेविसंघको राजनीतिमा लागे। राजनीतिसँगै शर्मा साहित्य र गीतसंगीतका क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्।
शर्माले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै यसपालि कांग्रेस महाधिवेशन रोचक हुने देखिएको छ। कांग्रेसका युवा नेताहरू यो पटक महामन्त्री पदमा आमनेसामने हुने भएका छन्।
महामन्त्रीमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापा र प्रदीप पौडेल पनि लड्ने तयारीमा छन्। थापाले त भदौ १४ मै महामन्त्री पदमा लड्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन्।
महामन्त्रीमा सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाण, मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरूङ, रमेश लेखक, एनपी साउद, सरिता प्रसाईंलगायत पनि तयारी गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले औपचारिक घोषणा गरेका भने छैनन्।
कांग्रेसमा दुइटा महामन्त्री पद छ। दुवै पद प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् आउने हो। यसपटक मनोनित महामन्त्री पद नभएकोले पनि युवा नेताहरू महामन्त्री पदमा नचाहेरै पनि आमनेसामने हुनेछन्।
कांग्रेसको महाधिवेशन मंसिर ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृह र भृकुटीमण्डपमा हुनेछ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता हुन्छन्। कांग्रेसमा करिब पाँच हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्।
अमेरिका बसेर कोरोनाबाट टेकु अस्पतालमा मान्छे मरेको अफवाह फैलाउने नयन पाण्डेले यी हुन्